Audio | Formats | QEERROO
Posted on August 9, 2017 by Qeerroo
Hawwisoon Qeerramsoo Dirree Maal Jedhanii Turanii??
Posted on April 11, 2015 by Qeerroo
April 10, 2015 Oromia
Asoosesee kan seenessu—-Kumsaa dha
Kaayyon isaa —————– Uummata Oromoo tokkoomsufi. Sabboonummaa fi absoo bilisummaa jajjabeesufi. Rakkina ilmaan Oromoo gad baasufi falli isaa tokkummaan kanee lolachuu akka taye ibsuufi.
Yaadannoon isaa————-Ilmaan Oromoo qabsoo irratti, mana hidhaatti, otoo biyyaa baqachaa deemanuu karaatti dhumaniif haa tawu.
Qabiyyee – rakkinni ilmaan Oromoorra jiru waan eexoo caala adhaa’aa deemef, gaafa barattoonni Ambotti hiriira nagaa bayanii sagantaa diinni dhala Oromoo lafarraa balleessuf baafate “Maastar pilaanii” balaleeffatan yoo waraana itti erganii fixan barataan umbarsittii Finfinnee birmatee dhaqee yoo tumsuuf qabanii mana hidhaa Qaallittiitti hidhani.
Sababiin rakkina ilmaan Oromoo “Tokkummaa” dhabuu akka tayee waan beekuf, uummata akkana baay’atu tokkoomsun dirqama kiyya tawuu qaba jedhee kutatee ka’e.
Yaada isaa sabboontota Oromootti erginaan sabboontonni jajjabeessanii, uummata Oromoo bakka hundaa, kabaa amma kibbaatti, bayaa amma lixaatti, biyya keessaa amma biyya ambaatti tokkummaan kaasani.
Walgayii “Fincila diddaa garbummaa” magaala Oromiyaa, Finfinnee, Hurufa Boonbitti waame.
Hawaasni Oromoo biyya jiran hundaa, bayaa amma lixaatti kaabaa amma kibbaatti biyyoolessa keessa jiraatanitti addabaabayiitti bayaniiti Hurufa Boonbitti “sikaaypiin” wal qunnaamaa, yaada isaanii uummataaf dabarsaa, isa biyyaa darbu doowwachaa oolani.
Waan Hurufa Boonbitii dabarsaa jiran uummanni TV fi raadiyoonin ordofa.
Rakkinni ilmaan Oromoo maal maal akka taye irratti dubbatani.
Uummanni Oromoo tokkummaatti amanee of bilisoomsuf murteesse.
Kabajamtootaa, waanan kitaaban kitabe isin hundaan gawuu hin dandeenyef, akka “diraamatti” qopheessee isinii tamsaasuf dirqameera. Gabaabsee dhiyeessuf yaaden ture. Garuu, yoon kana caala gabaabse ergaan isinii dabarsuuf yaade guututti dabarsuu hin dandeenye. Kanaafuu, naaf obsaa, akkuma yeroo argattanitti akka naaf dhaggeeffatan isinin afeera. Yaada yoo naa kennitanis gara fuulduraatti akkan itti jabaadhu na gargaara.
Nutu Sanyii Qeerraansaa/ Wallee Haaraa Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa
Posted on February 18, 2015 by Qeerroo
Artist Sabboonaa Duulaa Mulugeetaa “Hamma Tola Yoo Tolee Woo”
Posted on October 25, 2014 by Qeerroo
Wallee Haaraa Hawwisoo Qeerroo Bilisummaan ” Labsiii Labsii….. Qeerroon Faarsaa..”
Posted on June 18, 2014 by Qeerroo
Bara dhufee darbaan kan roorroo himatu,
Gajjallaaf gararraan afuufi haa diimatu
Wallee Warraaqsaa Sabboonaa Zaakir Abdallaadhaan
Asiin akkanaa,achiin rakkina jettan hoggayyuu.
Yoo akkana taate lafatti hafa akeekni hayyuu.
Ofuufta Sobaa madaa garaa dhaa kulkulan fayyuu..
Posted on May 12, 2014 by Qeerroo
Nageenyi Isaa Maaliif Boorahee? Biyya Abbaa Isaa Irratti Maa Ajjeefamee?
FDG Itti Fufuun Har’a Qeerroon Magaala Mandii Hiriira bahuudhaan dhaadannoo Mootummaan Cehumsaa nuuf haa dhaabbatu jedhu dhageessise. Uummatnis gamtaan waliin hiriire
Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo Mandii
Oromiyaa bakka mara keessatti FDG jabaachuudhaan kan itti fufe Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessatti haala ho’aa ta’een itti fufee jira!Dargaggoonni miseensota Qeerroo Bilisummaa ta’aniifii Uuummanni waliigalatti Magaalittii keessa naannawuun dhaadannoowwan gara garaa dhageessisaa jiru!
Finfinneen handhuura Oromiyaati!
Barattootni hidhaman haa hiikaman
Kanneen ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee itti gaafatama hatattamaa haa fudhatu
Sagaleen Ilmaan Oromoo haa dhagahamu’
Mootummaan cehumsaa nuuf haa dhaabbatu
Siidaan Minilik haa buqqa’u
Siidaan Gootawwan qabsaawota Oromoo haa dhaabbatu
Kanneen jedhanii fi kanneen biroo hedduu dhaadachuudhaan magaala Mandii waraanni mootummaa wayyaanee rasaasaan marsee bakka jirutti dura dhaabbachuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Ilmaan Oromoo bakka maraa ka’ee Qabsoo Oromoo eegalame akka galmaan gahus waamicha dabarsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun diddaan barattootaa Najjoo magaala Warra jirruu keessatti finiinuun diina keenya mootummaa wayyaanee dhiphina keessa seensisuu qeerroon gabaasee jira.
Latest News: Yuuniv arsiitii Haramaayaa keessatti FDG jabaat ee itti fufuun Mormi in sirna Wayyaanee i rratti gaggeeffamaa jira
Caamsaa 2,2014 Diddaan Qeerroo Jabaatee Itti Fufe
Haramaayaa University irra deebiidhaan.wav
FDG irra deebiidhaan Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti dhohuun barattootni Oromoo kumaatamaan lakkaawaman gamtaan isaadiyoomii keessatti walitti qabamuudhaan dhaadanoo dhageessisuu irratti argamu. Barattootni Oromoo gamtaadhaan gaaffii abbaa biyyummaa gaafatneef deebiin keenya rasaasa tahuu hin qabu, Ilmaan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaaf ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee itti gaafatama hatattamaa haa fudhatu, Oromiyaan biyya waan taateef keeyyatni 39 seera biyyattiin lafa kaawame hojii irra haa oolu jechuudhaan barattootni gamtaan sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Leellistoota sirna nafxanyaa tahan kanneen Oromoo fi Oromiyaa gurguraa as gahan Oromiyaa keessaa bahuu qabu jechuudhaan barattootni kunneen dhaadannoo isaanii dabalataan dhageessisuu irratti argamu. Mootummaan wayyaanee hundeen buqqa’uudhaan Oromiyaa walaba taate keessa jiraachuu qabna jechuun barattootni Oromoo qeerroon sabboontotni Yuunivarsiitii Haramaayaa sagalee isaanii dhageesisuu irratti argamu. Uummatni Oromoo Fincila diddaa garbummaa keessummeessaa QBO tarkaanfachiisaa as gahe duuba akka hin deebines dhaamsa dabarfatanii jiran.
Latest News: Godina Wallaggaa lixaa aan aa Ganjii Mana barum saa sadarkaa lammaff aa Ganjii Ganjii kee ssatti Barattootni H iriira gaggeessun dh aadannoo dhageessisu u irratti argamu
Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo
FDG Jabaachuudhaan kan itti fufe Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii mana Barumsaa sadarkaa lammaffaa Ganjii keessatti barattootni Oromoo Hiriira jabaa gaggeessuudhaan Mormii jabaa sirna wayyaanee irratti gaggeessuu irratti argamu. Barattootni kunneen gamtaadhaan ka’uudhaan dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa oolan keessaa
1. Lafa naannawa Oromiyaa murree hin laannu
2. Barataan ajjeefamuu fi arii’atamuu hin qabu
3. Oromiyaan kan Oromooti
4. Gaaffii mirgaa gaafachuun shororkeessaa nama hin godhu
5. Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha
6. Oromiyaan ni bilisoomti
Kanneen jedhanii fi kanneen biroo dhiyeessuudhaan hiriira bal’aa gaggeessanii jiran. Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu gaggeessu Barattootni Oromoo gamtaadhaan ka’uudhaan dhaadannoo dhageessisuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Gaaffiin Barattoota keenyaa gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii mirgaati jechuudhaan Uummatni Ganjii barattoota waliin tahuudhaan dhaadannoo dhageessisuu fi gaaffii abbaa biyyummaa finiinsuu irratti hirmaannaa jabaa godhanii jiran. Uummatni Oromoo ka’aa jechuudhaan Qeerroo bakka maraafis waamicha dabarsanii jiran.
Latest News: Caamsa a 2,2014 Gaaffiin a bbaa Biyyummaa Jabaa chuudhaan Magaalli B uraayyuu FDG simatte e gaggeessuu irratti argamti
Caamsaa 2,2014 Gabaasa Qeerroo Buraayyuu
Gaaffiin mirgaa fi abbaa Biyyummaa jabaachuudhaan kan itti fufe Uummatni, Dargaggootnii fi Barattootni Magaala Buraayyuu FDG gaggeessuu irratti argamu. Barattootnii fi Uummatni gamtaan sagalee keenya karaa hiriira nagaa dhageessisna jechuun kan eegale yoommuu tahu mootummaan wayyaanee garuu Waraana ittisa biyyaa fi Humna addaa Agaazii Uummatatti bobbaasuudhaan reebuu fi hidhuu irratti argama. Ilmaan Oromoo karaa nagaa gaaffii abbaa Biyyummaa dhorkamnee manatti hin deebinu jechuudhaan Waraana mootummaa wayyaanee rasaasa qabate waliin falma jabaatti seenee jira. Ilmaan oromoo bakka maraa ka’uudhaan wareegama qaqqaalii kaffalaa wayita jirutti nus wareegama barbaachisaa kaffalla jechuudhaan Gamtaan diddaatti seenanii jiran. Uummatni Oromoo bakka maraa ka’ee walabummaa Oromiyaa mirkansuuf akka hojjetus waamicha Oromummaa dabarsanii jiran.
Breaking News:-Gaaffiin Mirgaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Haromayaan Har’as Itti Fufe!
Latest & Breaking News : FDG Yuuniversitii Haromaayaa Duulli Farra Oromummaa Loltoota Wayyaaneen Gaggeeffamu Dhaabuu Hin Daneenye.
Posted on May 1, 2014 by Qeerroo
Caamsaa 1,2014 Haromayaa
Yuuniversitii Haromaayaa keessatti gaaffii mirgaa barattooti Oromoo karaa nagaa gaafataniif waraanni Wayyaanee Agaazii jedhamu reebichaa fi ajjeechaan deebii kennaa jira.Barattooti Oromoos kanaan diddaa hin dhaabne.
Sagaleen kun,Eda barii Caamsaa 1,2014 Waraanni Wayyaanee barattoota Oromoo nagaa barbaadu jequun reebichaa fi dararaa irraan gahaa ture kan muldhisu dha.
Sagalee Reebichaa Barattoota Oromoo irraan gahamu.wav
Posted on November 25, 2013 by Qeerroo
Artist Duulaa Mulugeetaa
Qoteebulaan qotuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee,
Barsisaan barsiisuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee.
Barataa barachuu dhiisee, qabamee mana hidhaa ciisee
Naggaadeen daldaluu dhiisee,qabamee mana hidhaa ciisee
Kun biyya abbaa isaa gadhiisee,godaanee biyya ambaa ciisee
Posted on November 19, 2013 by Qeerroo
Adeemaas olanii adeemaas bulani,Milkiin gaafa tokko!!
Posted on November 13, 2013 by Qeerroo
Gamtaa Qeerroo YSTA( Y.Adaamaa
MAANDHEE LEENCA GAARA MUUL’TAA.
Kabaja Waggaa 8ffaa (2005)FDG ilaalchisee Ibsa ABOn baase bu’ura godhachuun sagantaan keenya akka armaan gadii kana fakkaata.
BARUMAAN RAKKOO HIMACHUUN SALPHINA,MATUMTI ISAA RAKKINA
(Dhaamsaa fi Dhaadannoo Qeerroo YSTA)
Gita bittoonnii mootonni murni habashaa,dhimma aangoo ykn taayitaa walin wal jijjiruu irraatti waliif galuu yaa dhaban malee ilaalchi farrummaa ummata Oromoof qaban akka tokko tahe firaa miti diinumte shira kana tolchullee adda durrummaatti beeka,imaammata dulloomaa Abboonni isaanii dheengaddaa fi kaleessa bocanii addunyaa kanarraa daaraa tahan yeroo dhaloonni isaani akkuma kaleesaa udaan irra taa’anii waan gara fuulduraa tokko tarkaanfatamee gara boodaa tarkaanfii sadii deemuuf daddaaqan qalbii guutuu argaa jirra.kunnimmoo dadhabina osoo hin taane diinummaa addaa farrummaadha.Qqabxii gurguddoo diinaa farrummaa ummata Oromoorraatti raawwataa ture,ammallee haala suukanneessaa fi hedduu gaddisiisa yeroo inni itti bahaa jiru uumama hundatu ragaa taha. jabaannee,gurmoofnee,yoo falmanne malee borullee akka kana caalaa daraan dabalaa adeemuu eenyuu tilmaamuun isa hin dhibu(haa falmatu abbaan roorroon dhibe jennan).
Farrummaa mootota habeshaa Miliilik hangaa Wayyaanee mee haa ilaalluu :– Gamtaa Qeerroo YSTA. Yuuniversitii Adaamaa
Posted on October 28, 2013 by Qeerroo
Onkoloolessa 24,2013 Oromummaan himatamanii akeeka ABO ummataaf ibsuun gaaffii mirga saba Oromoo yaada jedhuun uummata kakaafataniitu himata jedhuun ilmaan Oromoo 69 ta’an Galmee Tashaalee Bakkashoo jalatti sabboonti Oromoo 33 mana murtii mana murtii Federaalaa olaanaa Lidetaa dhaddacha 4ffaa dhihaachuu gabaasi jiru Qeerroo addeessa.
Oromiyaa:- Walaloo Waayee Irreessaa/Qeerroo
Jalbultiin Ayyaanaa Irreechaa Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa Malkaa Deeddeetti Sirna Ho’aan Kabajame.
Posted on October 15, 2013 by Qeerroo
Onkoloolessa 15,2013 Jimmaa
Gootota Baratootaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Barsiisota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisotaa
Jimmaan ayyaneffatamaan jala bultiin ayyaana irreechaa sirna miidhagaan kabajamuu qeerroon gabaasee jira.
Qeerroon Dargaggoonni Oromoo sagaalee guddaa fi ifatti ABO fi WBO faarsuun, qabsoo bilisummaa Oromoo fi gootota Oromoo faarsuun jalbultiin kabajannaa ayyaanaa irreechaa jimmaa sirna aja’ibsiisaan egalee jira. Ayyaannii kun gaafa Onkololessaa 13/2013 Sirna ho’aa ta’een Malkaa Booyyee irraatti kabajama.
https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/020423444500.mp3 https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/020423571600.mp3 https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/020500101000.mp3 https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/020500101000.wav https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/02050010100023.mp3
Posted on October 6, 2013 by Qeerroo
https://qeerroo.files.wordpress.com/2013/10/voice001.mp3 Onkololeessaa 6/2013 Ayyaannii Irreechaa Malkaa Ateetee Burraayyuutti Sirna howaa fi ajaa’ibsiisaa ta’een kabajamuu qeerroon gabaase. Qeerroo sagalee weelluu warraaqsaan sadarkaa olaanaatti dhageesifama jira. Torbee Ayyaanaa Irreechaa Hora Arsadii